UMTHETHO Ulinganisa i-Horizon League - Qhathanisa noMsebenzi weeNqaku kwii-8 ze-University League
Ukuqhathaniswa koLwesibini ngeCandelo leeKholeji zeeKholeji zeeKholeji ze-8 kwiCandelo le-I IZikolo
I-Horizon League ngumxube othakazelisayo weeyunivesithi zikarhulumente nakwii-bucala kunye nemigangatho yokwamkelwa evakalayo evela kwizinto ezikhethiweyo zokuvula izivakalisi . Icatshulwa elibhekise kwicala ngaphantsi libonisa u-ACT amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye lezi-8 ze- Horizon League . Gcina ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile banomxholo we-ACT ngaphantsi kwabo babonwe.
Kwakhona khumbula ukuba izikolo ze-ACT ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avunyelwe kule Candelo Ii-univesithi ziza kufuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , inqaku elincinci, imisebenzi enentsingiselo yexesha elichanekileyo kunye neencwadi ezilungileyo zinconywa .
Unokuzijonga kwakhona ezinye izixhumanisi ze-ACT:
IZikole ze-Horizon League I-Scores (phakathi kwe-50%)
University of Cleveland 19 25 18 25 18 25
University of Oakland 20 27 20 27 18 26
KwiYunivesithi yaseDetroit Mercy 22 27 22 27 20 27
KwiYunivesithi yase-Illinois e-Chicago 21 27 21 28 21 27
Yunivesithi yaseWisconsin eGreen Bay 20 25 19 25 18 25
Yunivesithi yaseWisconsin eMilwaukee 20 25 19 25 18 25
KwiYunivesithi yaseWright State 18 25 17 25 18 26
IYunivesithi yaseNewstown State 18 25 17 24 18 25
IQumrhu leMigangatho yokuBhathaniswa kweNgeniso kwiiKholeji zeAlaska
UMTHETHO Ulinganisa ukungena kwiikholeji ze-Big South neeNyuvesi
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zeAlaska
UMTHETHO Ulinganisa ukufakwa kwiiYunivesithi ze-Ohio Valley
Quotes Jomo Kenyatta
Indlela yokuguqula phakathi kwamaDrama Fahrenheit kunye neCelsius
Imbali yeMichibi yeMichiza
Pierre Curie - I-Biography kunye neempumelelo
Pluto eCapricorn Ukutshintshela iiNdlu: I-Forecast yakho
Ama-Tiger Moths, i-Substamily Arctiinae
Ukhetho lukaMongameli - ESL Lesson
Inkcazo yoLwazi oluSisiseko
Iphi igesi elihle kakhulu?
I-Forty-Five: I-Battle of Culloden
Ukufunda i-Quiz kwi "Proposal Modest" ngoJonathan Swift
Iimpendulo zeMpilo zeMental
Ziyintoni na iiLwandle eziLwandle?
Indlela yokongeza iKholam kwiTable ye-MySQL
Iingoma ezi-5 eziphezulu kwi-Jay Z 'Ukungaqiniseki Ngokuqiqayo'
Iimfuno ezingabonakaliyo ze-fotos para las visas americanas